Abaqeqeshi kunye nabalandeli be-floriculture, ngokungathandabuzekiyo, bafuna ukuqokelela i-specimen encinci yesityalo esimangalisayo. Nokuba izityalo zangaphakathi zingasithengwa namhlanje.
Nangona kunjalo, kufuneka kukhunjulwe ukuba iintlobo ezinqabileyo zezityalo zangaphakathi akunakuthabatha ingcambu phantsi kweemeko ezithile, zinokufuna unonophelo olukhethekileyo kunye neemeko ezizodwa zobomi kunye nemozulu. Ngaphambi kokuthenga isityalo esingaqhelekanga sityalo, qiniseka ukuba ufunde ulwazi olungakumbi malunga nalo, ngenxa yokuba izityalo ezininzi zeempawu ezingenakuhlangana kunye nabanye abameli beqoqo lakho okanye nokuba notyhefu. Kule nqaku, ekuzinikezelweni kwezityalo zangaphakathi, siya kuthetha ngeentlobo zazo eziqhelekileyo.
1. U-Erythrina isityalo esivela kwintsapho yamagqabi, eyaziwa ngokuthi "i-coral tree", yafumana igama layo ngeentyantyambo eziqhakazile. Iimpawu ezintle ezimnandi kunye nexesha elide ezibomvu, zikhumbuza izithelo zeembotyi. Kwimvelo, kukho iintlobo ezincinci ze-erythrine, ngeentyantyambo ezimhlophe, ezimhlophe okanye ze-orange. Ukongeza kwinjongo yayo yokuhlobisa, ekhaya, i-erythrin yayisetyenziswa kakhulu kwi-intle-kazwelonke. Ngenxa yobungqina benkqonkqo enamandla, isetyenziswe ngokubanzi, ityalwe kwiindawo ezikhuselekileyo ukulungisa umhlaba. Ikhuni layo elinesibhakabhaka liyimpahla ebonakalayo yokwenza izixhobo zomculo kunye namathoyizi. Ukunyamekela okukhulu kufuneka kuthathwe imbewu ye-erythrine, kuba iqukethe i-erythroid, into enetyhefu engaphazamisa inkqubo yokuphefumula.
2. Takka isityalo. Amanye amagama athi "bathe", "intyatyambo kaDeveli", "i-lily black". Musa ukwesaba la magama angabonakaliyo, akukho namnye kubo ongenakulungiswa. Isityalo esitka, esikuloo ntsapho, sinombala omnyama ongaqhelekanga weentyatyambo (nangona iimpawu ezimhlophe zitholakala endalweni), ezivumela ukuba kuthathe isikhundla esiphezulu kwoluhlu lweentyatyambo ezintle kakhulu. Ukukhula kwesi sityalo ekhaya kunzima kakhulu, njengawo nawuphi na isityalo seTropiki, uTatka uyakuthanda ukufudumala nokunyuka. Iikiti ziba neempukane, kodwa ngokungafani nezinye izityalo, ayinayo iphunga elimnandi.
3. UDarlingtonia - ngowomntu weentsapho ze-sarraciniids kwaye unobunene boqobo. Ikhula kwindawo exhaphakileyo yaseNyakatho Melika. Ngokuhamba kwexesha, amaqabunga ayo abe migibe yeenambuzane ezincinci, okwenza le sityalo ibe ngumdla. Ingaphakathi lamaqabunga lihlanganiswe nectar edibeneyo, ekhangele inambuzane. Umphezulu weqabunga uhlanganiswe ngeenwele ezi-elastic, ezilungiselelwe ukuze inambuzane ewele, ihambe kuyo, ingena ngaphakathi kwisityalo. Nangona kunjalo, malunga nazo zonke izityalo, ukutya okuyisiseko, i-darlingtonia, ifumaneka kwinkqubo yeengcambu. Ukuba isityalo esithakazelisayo, iDarlingtonia iyancothula ekhaya ngokungalunganga, kwaye ukuyihlakulela yimikhosi yabathengi abanamava ngokwenene.
4. Intendeni yaseYukka, ingowomndeni we-agave, umzi wakhe nguMexico kunye neMntla Merika. Njengomthetho, ikhula ngohlobo "lwesundu" okanye i-shrub elinamaqabunga aluhlaza obunzima, angafikelela ubude be-30 cm ukuya kwi-1 imitha. Abantu abadala abadala be-yucca blooms kunye neentyantyambo ezinkulu ezimhlophe ezimhlophe, zifana neentsimbi. Ukulima kwe-yucca yasekhaya, kubalulekile ukubonelela ngokukhanya okukhulu, kwaye ehlotyeni kuya kuziva ukhululekile emoyeni, ngoko kuyacetyiswa ukuba ukhule kwi-balcony okanye kwintsimi ehlobo. Ukuba akukho ndlela yokukhulisa esi sityalo emoyeni, ngoko kuyimfuneko ukuba uvuselele igumbi rhoqo, kodwa ugweme iiprojekti. I-Yucca inokuziva inkulu emoyeni owomileyo, akuyimfuneko ukuyiphalaza, nangona ayiyi kuzisa i-yucca nzakalo, into efunekayo ukulawulwa ngokungqongqo kukuba amanzi akafumani ngaphakathi kwiphulothi amaqabunga abe.
5. I-Royal Strelitzia - isityalo esibizwa ngokuba ngu-Queen of England Charlotte-Sophia, ngenxa yembala ekhanyayo yeentyatyambo kunye neentyantyambo ezide, esi sityalo siye safumana ukuthandwa ngabantu bonke. I-Strelitzia ayifuni imithetho eqinile yokunyamekela, kodwa kuya kuba ngcono ukuba uzive kwindawo edibeneyo, ehlotyeni kungcono ukuba ungabonakalisi isityalo ukukhanya kwelanga. Kwimozulu eshushu, amaqabunga e-strelitzia kufuneka afakwe ngamanzi. Xa ukutyilisa ngokweqile, iingcambu zesi sityalo ziyakwazi ukubola. Ebusika, esi sityalo asinakufuna ukuthambisa, kuzo zonke ezinye izihlandlo ezisezantsi zokuthambisa ngamanzi afudumeleyo kuyimfuneko.
6. I-Dendrobiums - uhlobo lwama-orchids, oluqhelekileyo kwimimandla yempuphu ye-Southeast Asia, e-Australia, eNew Guinea. Ezi ntyatyambo zihluke kakhulu kwizinto ezibonakalayo, zinemibala eyahlukeneyo kunye nemibala. Amaqabunga e-apical afumaneka ubude besiqu. Esi sityalo sisetyenziswe kwisimo sezulu esiqingqiweyo, esichazwe ngumoya owomileyo nezulu. I-Spring kunye nehlobo ziqukethe i-dendrobium kwindawo efudumeleyo. Ebusika, ngokuchasene noko, kwimiqathango eyomileyo, nge-spraying encinane. Nangona uhlobo lwe-photophilic, ehlotyeni ezi zityalo zigcinwe kakuhle emthunzini. Kulungile ukukhula kwiinkompo ezincinci. I-substrate ephakanyisiweyo yokulima i-dendrobiums yimiqwenga elungisiweyo, i-pine bark, isanti, amalahle.
7. Iintlobo zezityalo - i-epiphytes, zincome kakhulu kwaye zihle, ngoko zilungele ngaphakathi ngaphakathi kwendlu. Ezi zityalo zaseTropiki ngoku zikhulile ngempumelelo ekhaya, zibandakanya: i-aerides, i-guzmania, i-celogin, i-phalaenopsis, i-tilliandsia, i-ripalis, i-adiantum, i-ligodium, i-drinaria, i-davallia nabanye abaninzi abameli be-epiphytes. Ngenxa yokukhula kwabo ngokugcwele, i-substrate ene-air-impermeable iyadingeka, ngoko izitya ze-ceramic ze-epiphytic plant will not work. Ufuna izimbiza ezininzi ngeemingxube ezantsi kunye neendonga, izitya ezenziwe ngamanzi ezenziwe ngamanzi okanye izibhloko zokhuni ziphelele.
Indlela yokunyanzelisa utamatisi - kwi-greenhouse, ngaphandle, iifoto namavidiyo
Indlela yokufunda ukuba yinkokeli kwinkampani
Indlela yokuqinisekisa umntu ukuba enze ngokwakho
Omelette kwindawo yokuhlamba amanzi
Inyosi kunye nama-noodle kwi-sauce emnandi neyomuncu
Isaladi "Inhliziyo Yentliziyo"
Imfihlelo yokukhohlisa: i-Lancôme La Nuit Uhlazo
Iinqwelo ze-eggplants zizaliswa ushizi
I-Pepper ebhakawa ngamacube kunye noshizi
Ukuzithemba kunye nendima yayo ekuphuhlisweni komntu
Ndiyakuvuyela ngoSuku lwe-Valentine ngomhla kaFebruwari 14, 2017 kumfana wam othandekayo nendoda, intombi yam intombi kunye nentombi yam intombi - in prose nevesi
I-Bruschetta enee-peas ezihlaza kunye nama-shrimps
Ukukhethwa kwesigxina sombane